Kaung Htet Paing Htoo: ရှေးမြန်မာ..
Kaung Htet Paing Htoo
ခရစ်နှစ် ၁၅၅၀ လောက်မှာပြုစုရေးသားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ နန်းစော ပါးစပ်ရာဇဝင် The Romantic History of Nan Chao မှာတော့ ဒီလိုတမျိုးပြောပါတယ်။ အာသောကမင်း Piao Chu Ti ပျူစောထီး သည် ချင်းမဲင်ခဝေး Chinmeng Kwei နှင့် စုံဖက်ပြီး တီမဲကျူး Ti Meng Chu (ထီးမင်းစော) ကိုမွေးဖွား။ အဲဒီမင်းစောထီးကမှ သား ကိုးယောက်ဖွားပြီး လူသားမျိုးနွယ်စု ကိုးခုတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေဖြစ်လာပါသတဲ့။ အဲဒီ နန်းစောပါးစပ်ရာဇဝင် ကျမ်းဟာ သူ့ရှေ့က ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ Pai Ku Chi ( Bai-gu-ji) ခေါ် ပိုင်မျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့ ရှေးဟောင်း ဒဏ္ဍရီပုံပြင်ကို မှီငြမ်းထားတာသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်။
နန်းစော ပါးစပ်ရာဇဝင်မှာတော့ အာသောကမင်းကို Piao Chu Ti ပျူစောထီး လို့ပြောထားပါတယ်။ ပျူစောထီးရဲ့ သားဟာ တီမဲကျူး Ti Meng Chu (ထီးမင်းစော) ဖြစ်ပြီး သူ့မျိုးဆက်တွေက
၁။ သားကြီး မဲင်ကျူးဖုလော် (အိန္ဒိယသားတို့ရဲ့ ဘိုးဘေး )
၂။ မဲင်ကျူးလီယယ် (တိဘက်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေး )
၃။ မဲင်ကျူးနော့ (ဟန့်တရုတ်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေး)
၄။ မဲင်ကျူးချို ခေါ် မင်းစောချို (အရှေ့မန်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေး)
၅။ မဲင်ကျူးတူ (နန်းစော မဲင် တို့ရဲ့ ဘိုးဘေး )
၆။ မဲင်ကျူးထူးအော် (သီရိလင်္ကာသားတို့ရဲ့ ဘိုးဘေး)
၇။ မဲင်ကျူးလင် (ကျော်သသည်းတို့ရဲ့ ဘိုးဘေး)
၈။ မဲင်ကျူးစုန့် (ပိုင်မျိုးနွယ်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေး)
၉။ မဲင်ကျူးချူ ( တိုင်း ခေါ် ထိုင်းတို့ရဲ့ ဘိုးဘေး)
ခရစ်နှစ် လေးရာစုလောက်မှာ ပြုစုတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ ဟွာရန်ဒေသသမိုင်း (သမိုင်းဆိုပေမယ့် ဒဏ္ဍရီသိပ်ဆန်) ဟွာရန်(ဇ်) ကူ-အော်ကျိရ် Hua-yang-kuo-chih မှာ ပျူစောထီးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်သွားတွေ့ပါတယ်။
ရှေးဟောင်း အိုက်လောင်နိုင်ငံ Ai-Lao Kingdom က ရှားယိ ဆိုတဲ့ တံငါသည်အမျိုးသမီးဟာ ရေထဲမြုပ်နေတဲ့ သစ်တုံးနဲ့ ထိမိပြီး သားဆယ်ယောက်ဖွားမြင်ပါသတဲ့။ အမှန်တော့ သူထိမိတဲ့ သစ်တုံးဟာ နဂါးတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါသတဲ့။ နောက်တော့ တစ်နိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ အခြားလင်မယားစုံတွဲမှာကြပြန်တော့ သမီး ၁၀ ဦးဖွားမြင်ပါသတဲ့။ ပြီးတော့ ဟိုဘက် ကျား ၁၀ ဦး ဒီဘက် မ ၁၀ ဦးစုံမက်အကြောင်းဖက်ပြီးသကာလ လူမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ဘိုးဘေးတွေဖြစ်လာပါသတဲ့။
ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်နှစ်ခုထဲက နန်းစော ပါးစပ်ရာဇဝင်လာ အာသောကမင်းဟာ Piao Chu Ti ပျူစောထီး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ကတည်းက ဒီပုံပြင် ကိုပယ်ဖို့လုံလောက်သွားပါပြီ။ ဒုတိယ ပုံပြင်ကတော့ မြန်မာတို့ရဲ့ ပျူစောထီး ဇာတ်လမ်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်သွားတွေ့ပါတယ်။ မြန်မာတို့ ရဲ့ ပျူစောထီးဇာတ်လမ်းမှာတော့ နေနတ်သား နှင့် နဂါးမ စုံမက်၊ နဂါးဥတွေ ဥပြီးထားခဲ့၊ ဥတွေထဲက နှစ်လုံးက လူဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ဟွာရန် ရာဇဝင်မှာကြပြန်တော့ လူမိန်းမ နှင့် နဂါး စုံမက်၊ လူတွေမွေးဖွားပြီး လူသားမျိုးနွယ်တချို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေဖြစ်လာ ဆိုပြီးပြောထားတယ်။
မြန်မာတို့ရဲ့ ပျူစောထီးမူကွဲတစ်ခုမှာတော့ မုဆိုးပြုတ်ကျ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဥ တစ်လုံးဟာ တရုတ်ပြည်ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်။ ယုတ္တိမရှိပါ။
ခရစ်နှစ် ၉ ရာစုကာလ တရုတ်မှတ်တမ်းတွေမှာ ရေးမှတ်ခဲ့တဲ့ နန်းစော မင်းဆက်တွေက
၁။ ယှီး နုလော် ( ၆၄၉-၇၄ )
၂။ လော်ရှဲင့် ( ၆၇၄-၇၁၂ )
၃။ ရှဲင့်လော်ဖီ ( ၇၁၂- ၂၈ )
၄။ ဖီလော်ကော် ( ၇၂၈-၄၈ )
၅။ ကော်လော်ဖဲင့် ( ၇၄၈-၇၈ )
ကော်လော်ဖဲင့် မင်းရဲ့ သားဖြစ်သူ ဖဲင့်ကျီးယိဟာ စောစောစီးစီး ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် သူ့အရိုက်အရာကို မြေးဖြစ်သူ ယိမိုရွှန်း ကဆက်ခံပါတယ်။
၆။ ယိမိုရွှန်း ( ၇၇၈-၈၀၈ ) ဒီမင်းလက်ထက်မှာ နန်းစောသံတမန်တွေနဲ့အတူ ပျူတီးဝိုင်းအဖွဲ့ တရုတ်ပြည်ကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေရပါတယ်။
၇။ ရွှန်းကော်ချွမ်း ( ၈၀၈-၉ )
၈။ ချွမ်းလုန်ရှဲင့် ( ၈၀၉-၁၆ ) ၊ ချွမ်းလုန်ရှဲင့် ဆုံးပါးတဲ့အခါ ညီဖြစ်သူ ချွမ်းလိ အရိုက်ရာဆက်ခံ။
၉။ ချွမ်းလိ ( ၈၁၆-၂၄ ) ချွမ်းလိ ဆုံးပါးတဲ့အခါ ညီဖြစ်သူ ချွမ်းဖဲင့်ယို့ အရိုက်ရာဆက်ခံ။
၁၀။ ချွမ်းဖဲင့်ယို့ (၈၂၄ -၅၉ ) ဒီမင်းလက်ထက်မှာ မြန်မာတို့ရဲ့ သရေခေတ္တရာကို တိုက်ခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
၁၁။ ရှီရ်လုန် ( ၈၅၉-၇၇ ) ဒီမင်းတက်လာပုံ မရှင်းပါ။
၁၂။ လုန်ရွှန်း ( ၈၇၇-၉၇ )
၁၃။ ရွှန်းဟွာ့ကျဲင် ( ၈၉၇ - ၉၀၂ ) ဒီမင်းလက်ထက်မှာဘဲ နန်းစောနန်းဆက်ပြတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အပေါ်မှာ တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တဲ့ နန်းစောမင်းဆက်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ ဘိုးဘ အမည်စနစ်လို့ ခေါ်တဲ့ အဖေဖြစ်သူရဲ့ နာမည်နောက်ဆုံးစာလုံးကိုယူပြီး သားဖြစ်သူရဲ့ ရှေ့နာမည်အဖြစ်သုံးတဲ့ ဓလေ့ Patronymic System ဟာ နန်းစောမင်းဆက်တွေမှာ သုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာတို့ရဲ့ ပျူစောထီး၊ ထီးမင်းယဉ် ၊ ယဉ်မင်းပိုက်၊ ပိုက်သေလည် ၊ သေလည်ကြောင် စတဲ့ အမည်စနစ်မျိုးကို မြန်မာမြေပေါ်က ပျူတွေမသုံးပါ။ ဘာလို့ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသနက တူးပေါ်တွေ့ရှိတဲ့ ကျောက်အရိုးအိုးတွေပေါ်က ပျူမင်းဆက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါ အဲဒီလို ဘိုးဘအမည်စနစ် Patronymic System မသုံးတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလို ဘိုးဘအမည်စနစ် Patronymic System ကို အိန္ဒိယသားတို့ဖြစ်တဲ့ သာကီဝင်မျိုးနွယ်တွေမှာလည်း သုံးတဲ့အထောက်အထားရှာမတွေ့ပါ။ ဒီတော့ မှန်နန်းအဆို ပျူစောထီးဟာ သာကီဝင်မင်းမျိုး ဆိုတဲ့အပြောကို ငြင်းချက်ပေးဖို့ နောက်ထပ်အကြောင်းရာတစ်ခုထပ်ရပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ စာရေးဆရာမ ဂျူး ရဲ့စကားကို ငှါးပြီးပြောချင်တာက ' ရာဇဝင်တွေထဲမှာ ပျူစောထီးကို ထားခဲ့ ' ဆိုတာပါဘဲ။
မိုးဝေမဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂၁၄၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၈၆ ၊ စာ ၇၆-၇၉ ၊ အမှတ် ၂၁၅ မတ်၊ ၁၉၈၆၊ စာ ၁၂၂-၁၂၆ ပညာရှင် ရည်စိန်ရဲ့ ' ပျူစောထီး သုတေသန ' စာတမ်းကို မှီငြမ်းကိုးကားပါသည်။
Posted by kaung htet paingh htoo at 3:10:00 AM
Labels: History (သမိုင်းကြောင်း)
kaung htet paingh htoo
My name is Kaung Htet Paing Htoo. I want to share you knowledge and enjoyments.
Article (20) Entertainment (11) Free Download E-books (46) Funny Celebrities (3) Game Play (1) History (သမိုင်းကြောင်း) (1) Info (5) MTV (3) Musics (3) Nude Funny Pics (1) Photos (1) Poems (1) Softwares (3) Translation to Myanmar (1) မြန်မာသီချင်းများ (1) ဆေးပညာ (1)
Windows 8 Style Launcher and Themes for Android (Free Download)
credit to 1mobile Windows8 GO Launcher EX Theme 1.1 Windows8 GO Launcher EX Theme 1.1's Description "Windows8 GO Launch...
Free Download Harry Potter eBooks Series
Free Download Harry Potter eBooks Series Harry Potter and The Sorcerer's Stone Harry Potter and The...
Percy Jackson eBooks Series Free download
Free download eBooks in PDF format (Percy Jackson and the Olympians (Series)) Rick Riordan - Percy Jackson & Th...
Nude Funny Pics ( Just For Laugh )
Jack and the Beanstalk [Hardcover] To download "Click Here "
Top 15 Most Popular Search Engines | April 2013
ပရိသတ် စံချိန်တင် ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သည့် စိုးသူ၏ အခမ...